विश्वकपको नतिजा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईलाई विशेष अफर !
काठमाडौं, ३० जेठ – विश्वकप फुटबल नजिकिएसँगै उपाधि जित्ने टीमबारे विभिन्न अनुमान गर्न थालिएका छन् । आफूले रुचाएको टीमको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाइएको छ ।
खेलकुद र फुटबलमा रुचि राख्ने अधिकांश व्यक्तिले रुचाइएको टीमको जर्सी टी–सर्ट लगाउने र सामाजिक सञ्जालमा समर्थन प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनलाइन खाना डेलिभरी कम्पनी फुडमान्डुले फुटबल महाकुम्भ विश्वकप–२०१८ मा आफ्ना सेवाग्राहीको लागि ‘चियर्स योर टीम’ अफर ल्याएको कम्पनीका बजार व्यवस्थापक अंकितराज खत्रीले बताए । उनका अनुसार घरमै साथीभाई तथा परिवारसँग खेल हेर्दै खानाको मजा लिने र हरेक अर्डरसँग खेलको नतिजा अनुमान गर्न पाउने छन् ।
अनुमान मिलेमा १० प्रतिशत छुट र केही अंक पाउने छन् । विश्वकपको अन्त्यसम्म धेरै अंक जम्मा गर्ने ग्राहकले सामसुङ्गको ४३ इन्चको स्मार्ट टिभी उपहार स्वरुप पाउने छन् । विश्वकप अवधिभर विभिन्न रेस्टुराबाट ४० प्रतिशतसम्म छुट र विभिन्न आकर्षक परिकार समेत उपलब्ध हुने व्यवस्थापक खत्रीले बताए ।